Olan'ny windows 8 - Dinika forum.serasera.org
Olan'ny windows 8
Fitohizan'ny hafatra : Olan'ny windows 8
hery - 29/07/2013 10:41
Ohatry ny mahakivy ahy ilay windows 8. Toa manjary manana tendance smartphone ilay izy. Indraindray ara tahaka ny tsy manao multi-task intsony.
Raha manokatra video ohatra dia tsy afaka sady manao zavatra hafa, na farafahabetsany zavatra 1 ihany no azo atao rehefa akisaka amin'ny sisiny ilay video. Tsy maintsy mampiasa VLC izany vao afaka sady mijery film no manao word no manoratra zvt hafa (misy fenetres maromaro)
Toa izany koa rehefa manokatra skype, tsy afaka sady manoratra amin'ny skype no manoratra eto amin'ny forum no mijery zavatra hafa.
Fa ilay izy aloha malakilaky kokoa e.
Nehemiah - 29/07/2013 16:11
Misaotra nampahafantatra krkrkrkrkr
5laody - 29/07/2013 18:11
andraso indray ny 9 e
Nehemiah - 30/07/2013 07:57
Izaho marina tsy nahatsikaritra an'ity motif ity
endriny - 16/08/2013 15:17
Hery, ka atao ahoana eh... Hafa ihany ny XP a...
5laody - 22/08/2013 12:28
ilay bureau io anie hono toa azo averina bureau classique ohatry ny am in'ny version taloha ireny e, Mampiasa izany start8 izany dia afaka miovaova birao (misy 2 eme bureau izany lol).
Efa ela aho no afaka tamin'ny sigara windows fa mbola miverina tsindraindray tadiavina ihany eto raha leo na hanisy roue de secours.
hery - 27/08/2013 12:27
Tsy tafa ilay tsy mampiasa windows mihitsy e Efa nanandrana ihany aho fa tsy tafa. Sady tsy hitako izay linux mety mahasolo ny filàko windows. Sady amin'izay koa ny linux mitranga mavesabesatra daholo... moa izay maivana tsy mahavita ny tiana hatao.
Efa manomboka zatra windows 8 aho aloha amin'izao afats'io multi-task io. Dia ny ataoko dia mampiasa fitaovana hafa fa tsy tonga dia maka izay atolotry ny windows 8.
gasipetak - 29/08/2013 10:19
zaho manokana aloha dia afa-po amin'ny Window 8 hatramin'izay fotoana nampiasako azy efa heritaona mahery izay. Marina io voalazan'i Hery io hoe tsy mampiasa izay atolotry ny Windows fa tsy misy ilàna azy mihitsy ireny... fa ovaina daholo ny appli par défaut, sady maivana izy no sécurisé kokoa par rapport @ windows hafa teo aloha... sady maro ny logiciels nampiasaiko taloha tsy nandeha tamin'ny W7 fa mety tsara amin'ny W8... fa ny fahazana mampiasa azy fotsiny no ilaina fa tena mailaka kokoa ah mampiasa W8
endriny - 07/06/2014 08:10
Izaho aloha leiretsy amin'ity habadoako ity dia ny tano ny azo no itondrako azy a.. Toa tsy dia hitako loatra ilay hoe mailaka kokoa satria izaho tsy mijery famataran'andro, fa rehefa vita ny tiako atao dia tsara amiko.
Ny ahy mbola XP daholo ny interface rehetra ka sarotra amiko na ilay vista aza... Saingy voatery hiova ihany atsy ho atsy dia ho hita eo